आमिर खानको सेक्रेट सुपरस्टारको चीनमा १ साताको कमाइ भारतकोभन्दा सात गुणा बढी! Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 05:11:03
जापानी समय : 08:26:03
Tag: आमिर खानको सेक्रेट सुपरस्टारको चीनमा १ साताको कमाइ भारतकोभन्दा सात गुणा बढी!
आमिर खानको सेक्रेट सुपरस्टारको चीनमा १ साताको कमाइ भारतकोभन्दा सात गुणा बढी!
भारतीय दर्शकले आमिर खानको पछिल्लो फिल्मलाई अरु फिल्म झै रुचाएनन् तर चिनियाँ भने उनको यो फिल्मबाट व्यापक प्रभावित भएका छन्। भारतमा रिलिज भएर एक सातामा जति यो फिल्मले कमायो, त्यसको सात गुना बढी कमाई चीनमा त्यति नै अवधिमा कटायो।
सेक्रेट सुपरस्टारभन्दा अगाडि आमिर खानले चाइनिज बक्स अफिसमा दङ्गलबाट भब्य कमाइ गरिसकेका छन्। गत वर्षको बाहुबलीले भन्दा बढी कमाउने फिल्म दंगल बन्नुमा चिनियाँ दर्शकबीच लोकप्रिय हुनु रह्यो। विश्वव्यापी रुपमा २ हजार २ सय करोड कलेक्सन गरेको छ दंगलले जसलाई उछिन्न बलिउडका कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्न सकिन्न।
ब्यापार बढाउँदै ‘सीक्रेट सुपरस्टार’
Posted in कला/मनोरन्जन, वलिउडTagged आमिर खानको सेक्रेट सुपरस्टारको चीनमा १ साताको कमाइ भारतकोभन्दा सात गुणा बढी!